LALAO RAVALOMANANA : MIVAVAHA KA AZA MITSAHATRA FA NY VAVAKA NO MANOVA ZAVATRA – MyDago.com aime Madagascar
Notanterahana tetsy amin’ny Fjkm Ankadifotsy ny fotoam-pivavahana nitondrana am-bavaka ny fianakaviana Ravalomanana. Nanomboka tamin’ny 12ora sy sasany ny fotoam-pivavahana. Tonga nanatrika izany teny an-toerana Ramatoa Lalao Ravalomanana. Niara-niombom-bavaka tamin’i Neny ihany koa ireo kristianina marobe. Nisy ny fandraisam-pitenena nataon’ny vadin’ny filoha mpanampin’ ny Fjkm Ramatao Lalao Ravalomanana. Amin’ny anaran’ny Jesosy Kristy izay efa noraisiko ho tompo sy mpamonjy hoy izy no hamerenako ny fisaraoko an’Andriamanitra fa nahatsiaro fa Andriamanitry ny hery sy fahefana izy, ary mahatsiaro indrindra fa Andriamanitra nanome an’i Jesosy Kristy zananay ho famonjena antsika. ho fahatsapako izany fahalehibezan’Andriamanitra izany dia mbola horaisiko ny tenin’ny soratra masina manao hoe : Ry olombelona efa naseho anao izay tsara amin’ny Jehovah dia Ianao marina, ho tia famindram-po, ary hananan’Andriamanitra amin’ny fanetre-tena.
Misaotra hoy izy ny Fiangonana Fjkm Ankadifotsy nampiatrano ny fotoana androany. Mbola miarahaba antsika amin’ny fo feno fitiavana satria ny fitiavana manarona zavatra maro. Namafisiny fa mivavaha ka aza mitsahatra fa ny vavaka manova zavatra. Manana finoana hoy izy rehefa Andriamanitra no miasa dia tsy misy zavatra tsy hainy.
Vavaka hoan’ny Firenena !
Auteur Solo Razafy*Publié le 8 mai 2013 8 mai 2013 Catégories Politique
16 réflexions sur « LALAO RAVALOMANANA : MIVAVAHA KA AZA MITSAHATRA FA NY VAVAKA NO MANOVA ZAVATRA »
Mbola vao vavaka ity ray olona an
jereonareo ireto olona!!!tomefy!!!
Dia ahoana koa ity anaran’i Neny ity ray olona???Manome litika be!!
Tena manahirana be mihintsy angaha ilay RAVALOMANANA ka ahilika mafy ary @
FARANY ARY MIHINTSY???MAHONENA!!!!izy anie mbola any Atsimo fa vao anarana
fotsiny io ry ilay MAIZINA rehetra e!!!
IRETO ANKOLAFY DADA ireto tena VONGANY mihintsy.TENA MAIK’ AH ‘ZAY!!!
salama ranavalona a!hita ho faly sy misy tsirim panantenana kosa ny olona rehefa andalovan’i neny e!aleo dia izay zavatra tsara no jerena fa tsss,mazotoa foana e! mivavaha kaaza mitsahatra koa aza ny hafatr’i neny,koa mahereza daholo e!
8 mai 2013 à 20 h 02 min
Natao ny fiderana an Andriamanitra.
Tsara raha ampiarahana @izany ny tena fototrasa .
Dia ny Fampielezan kevitra ,izay tokony Hakasiaka ny Malagasy tsirairay .
Kely ny fotoana ary ny entimanana sy ny fitaovana tsy fantatrra aiza sy iaza .
Marina fa mino an Andriamanitra isika ,fa kosa mila Hezaka lehibe ny fandresena sy ny hanpadeha tsara ity fifidianana ity koa mila hatomboka ny tena asa.
Matahotra angaha ianao fa sao dia lazain’ny olona fa hoe vadin’i risara baomba ramatoa ?
Ny tianao ve dia tokony mba natao toa ny an’ity RABEHARISOA Sarha épouse GEORGET ?
Vazaha angaha ilay tary ?
Avelao handeha amin’izao ê !
Itony mba jerena ! Matahotra ihany anefa aho sao dia mpiaro an-dry zalahy ianao !
3 – Dr Jules Etienne Rolland
10 – Camille VITAL
14 – Didier Ignace RATSIRAKA
33 – DR Jean-Louis Richard Robinson
36 – Général Ratrimoarivony Guy
Ny amiraly aza tsy nahazo girady intsony, tsy napetraka akory ny hoe efa Filoham-pirenena in-telo !! I VITAL moa, asa na efa vita ny alina !
Ny fantatra ihany koa moa izao dia ny hoe tsy mahazo manala ny firotsahany intsony i ‘Degara !
9 mai 2013 à 2 h 05 min
9 mai 2013 à 7 h 29 min
Ny vadin’ny filoha no mandeha mivavaka dia ny vahoaka tsy mila vidina vola fa dia tonga manotrona.
Raha vao migadona eny Ivato fotsiny ‘zany ny filoha Marc Ravalomanana dia manontany fotsiny izy hoe référendum ve no hatao sa ahoana ?
Eny : i Lalao Ravalomnanana no hatao filoha
Tsia : i Andry Rajoelina halefa mody any an-tanindrazany (Firanta)
Hadinon’Izy ilay farany ô!!ilay » Y » .
Zavatra herim-boatay anie sisa io hilatsahany io e!
Tsy misy hanaiky an’io eo na hangala-bato ho 100% aza izy, ary TSY MAINTSY.
9 mai 2013 à 14 h 49 min
Noheveriko fa lasa nanatrika RNS anie izato ranavalona ! Any daholo izao ny tia tanindrazana, mpiaro an’i Madagasikara sy izany atao hoe « firaisan-kina sy soatoavina malagasy »!
voatabia dit :
9 mai 2013 à 15 h 52 min
les prières c’est bien, mais il faut surtout des hélicoptères (beaucoup) et des agents de surveillance électorale dans les fonkontany et partout à tous les niveaux (même au ministère de l’Intérieur et même au CES) . Et puis il y a problème, comment les illetrés (il y en a des millions) vont ils distinguer le numéro 2 du numéro 29 ?
Remarque pertinente, voatabia.
Izahay tsy any amin’ny RNS, KM!
9 mai 2013 à 19 h 18 min
Rahampitso aho vao tena tsy eto fa sao mitabataba eo an!
hisintaka kely fa izy sy ankizy dia eto ihany, Manaraka mora2 eo ihany
tena miazakazaka be ilay vao2 sady mahafinaritra ka mila tsy ho araka.
Inona indray ity politika vao2’i Mydago ity ry zareo a???inona indray no fonosin’izao e???
izay kandidà mitsofotsofoka aty afa tsy Neny dia atontsika MAIMBO, indrindra ireo tė haka pasipaoro @
fanonontononana ny anaran’i Dada.
OK Ratsimilaho !
Hanatrika ny lanonam-pamarànana angaha ranavalona ? MDR !!
Lazao ireo mba hijery ny hoavin’i Gasikara ê !
9 mai 2013 à 19 h 53 min
Misy famaranana angah hono nàmàa??
vetivety ihany f’ angah mahazo mijanona ela izany.
Dia hendry tsara daholo!
tairoary dit :
Inona ary ity any am-piangonana foana ity? Ny datim-pifidianana tazonin’ny movansa kanefa isika mbola any am-piangonana, ny sasany efa mitety faritra. Alefao amin’izay ny tena politika e!
Asio radio tele mandeha amin’izay o na tsy MBS aza o
Dia ny birao mazava misy ny fanohanana an’i Neny
Précédent Article précédent : Tirage au sort, ordre d’apparition sur le bulletin unique et sur les affichages: num 2 Lalao Harivelo Rakotonirainy Ravalomanana
Suivant Article suivant : Pourquoi je soutiens Saraha Georget Rabeharisoa et le parti Vert malgache …